SYABAS Tak Selenggara Rumah Pam Untuk Wujudkan Masalah Air Di Balakong
Recognition For Barrier-Free Efforts
Oh What A Zumba Night!
Janji ditepati: Najib protects self, not whistleblowers
SNSD Tiffany Ceci Magazine
[VIDEO] P1 Bala Dedahkan Ditawar RM200K & Banglo Di London Untuk Burukkan Anwar
ရခိုင်မှာ မွတ်စလင်လူနည်းစုကို ပစ်မှတ်ထား ဟု Amnesty သတင်းထုတ်ပြန်
My Homemade Mixed Grill
Korean horse riding fitness machine
Pekerja Butik Dirogol "Pelanggan"
SAMM: Penahanan Rafizi Percepatkan Kejatuhan BN
ရှစ်လေးလုံးမျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုကိုကြီးသို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ
[VIDEO] Saksikan Usaha Mengeluarkan Mayat Dari Perut Buaya!
WHEEL POWER: Even Dogs Need A Park
[BERGAMBAR] Suami Isteri Maut Kemalangan Babitkan2Bas,5Kereta &2Motorsikal
This is 34-year old Melbourne nurse Emma Louise L'Aiguille who is facingapossible death sentence for alleged drug trafficking in Malaysia.
According to the police, they found one kilogram of methamphetamine inacar driven by the Victorian recently. Also arrested with her is Nigerian man Anthony Esikalam Ndidi, who wasapassenger in the vehicle.
She is now detained inawomen's prison until October 1, charged with drug trafficking, and the only sentence is the death penalty.
Emma says she did not know the drugs were in the vehicle she was driving. Her mother, Amanda Innes, told Australian ABC local radio she fears for her daughter's life and pleaded for her not to be executed.
Okay. That's the story. She is innocent until proven guilty. But the related story goes like this:
An opposition pressure group and its NGOs are already in contact with the Australian opposition party, offering help to get her out of the country.
Some quarters Down Under too had contactedafew people in Malaysia for her dismissal from any charges and trial. They believe that the Malaysian authority is holding her wrongly and that the Nigerian is the right person to prosecute as Africans are 'master of the drug trades'.
Diplomatically, its good but not politically. Malaysia had never asked any favor from Canberra to give special treatment to any Malaysian caught peddling illicit drugs in the country and as far as I can recall, Australia too had never done the same.
But Malaysia is very close to holding its general election. A few people in the opposition camp are trying to garner foreign support for its plan to take over Putrajaya. Whether it is possible or not, the Home Ministry, Bukit Aman and the Atorney-General Chamber will feel the heat soon when the pressure groups politicise the case.
After all, some Aussie politicians, especially from within the opposition have been throwing their support for Pakatan Rakyat, as had been showcased in some incidents, and this time they are bankingahigh hope for Emma's release.
We will soon hear from PR spokeperson. Later on from Suaram and NGOs of the same pool.
Emma will have to face charges and stand trial. We will let the law takes its own course. If she is clean, she will be acquitted.
Nobody should intervene unless he or she produces the best lawyer to represent her. Manipulating the issue will bear no fruit. And about the Nigerian?
I also hope she is not guilty...
Posted: 02 Aug 2012 11:04 AM PDT
Syabas gagal selenggara rumah pam punca taman tiada air, kata Ronnie
SHAH ALAM, 1 Ogos ― Kerajaan Selangor hari ini menegaskan, krisis ketiadaan air yang berlaku di Balakong adalah berpunca daripada kerosakan pam air dan kolam simpanan air yang tidak diselenggara dengan sempurna oleh Syarikat Bekalan Air Selangor (Syabas).
Exco Kerajaan Tempatan, Kajian dan Penyelidikan Selangor, Ronnie Liu ketika sidang media hari ini menegaskan, keadaan tersebut menyebabkan Syabas tidak dapat membekalkan air terawat yang mencukupi kepada penduduk di kawasan berkenaan.
"Berdasarkan lawatan kita ke kolam simpanan air di Balakong, hampir semua kolam tersebut tidak dijaga dan ada yang rosak," katanya.
"Malah, banyak kolam air ini tidak diselenggara dengan baik. Kebanyakkannya tidak mempunyai pam air dan motor pam telah rosak ... bukan itu sahaja pintu pagar pun hilang, ini sangat membahayakan keselamatan penduduk khususnya kanak-kanak," katanya yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Pandamaran.
Antara kawasan yang terjejas dengan situasi berkenaan adalah di bawah pentadbiran Majlis Perbandaran Kajang, iaitu Taman Bukit Belimbing, Taman Seri Belimbing, Taman Juara Jaya, Taman Harmoni Indah, Taman Seri Timah, Taman Tanming Jaya, Taman Seri Jati, Taman Putera Budiman, Taman Balakong Jaya, Taman Puncak Utama, dan Taman Sri Pulai dan Kawasan Perindustrian Balakong Jaya.
Sementara dua kawasan lain di bawah Majlis Perbandaran Subang Jaya adalah Kampung Tengah dan Taman Sungai Besi Indah di Seri Kembangan.
"Kerajaan negeri telah mengarahkan PBT menggunakan lori tangki ke kawasan-kawasan yang terjejas ini untuk menyalurkan air, dan Syabas akan membayar kos ini kerana mereka gagal menjalankan tugas mereka.
Kesal dengan tindakan itu, Ronnie menegaskan, tindakan Syabas itu menyebabkan penduduk di sekitar kawasan terbabit tidak menerima bekalan air terawat yang mencukupi.
Sehubungan itu, Ronnie turut menggesa Syabas agar mengambil tindakan segera bagi membaik pulih kolam air yang terjejas.
Pihak berkuasa tempatan di kawasan berkenaan juga akan membuat laporan polis berhubung keadaan rumah pam berkenaan bagi mengelakkan kejadian tidak diingini berlaku.
"Syabas seharusnya mengganti motor dan pam yang rosak supaya bekalan air di kawasan yang terjejas mencukupi," katanya lagi. -TMI
Taman Putra Budiman residents want pumphouse fixed
LOW-WATER pressure has becomeadaunting problem for residents of Taman Putra Budiman in Balakong Jaya.
Residents at the five-storey walk-up apartments are the worst affected, especially those staying on the upper floors.
The low-water pressure is due to flooded pumphouse and despite several complaints to Syabas the problem has not been solved.
The poor drainage system had flooded the pumphouse which is inalow-lying area.
Serdang parliament constituency coordinator Datuk Yap Pian Hon said the residents were facing this problem for the past one year.
"I was shocked to see the pumphouse in water and nothing has been done to rectify the problem," said Yap.
He added that he had written to Syabas and was waiting for their response.
The fencing around the pumphouse is also not maintained, providing easy access to drug addicts as several used syringes were found at the premises and some disposed off into the pool of water.
N. Paramasivam, 62, who live on one of the upper floors of the apartment, said the water pressure was good until lately.
"The pressure is low.
"The water hasafoul odour and is yellowish," said Paramasivam.
Housewives Wong Ah Lian, 62, and Koh Up Hian, 54, said this problem was troubling them day and night.
Another resident Fong Sau King said her grand-daughter was suffering from skin irritation every time she had her bath.
"The water is dirty and unhealthy for children,' said Fong.
Yap said he would ask Syabas to rectify the problem immediately and also to fence up the place to prevent drug addicts from using the area.
"I will follow up with the issue until the residents are provided with clean water supply," added Yap. -The Star
Posted: 02 Aug 2012 09:00 AM PDT
CAPAM AWARD:MBPJ is among top three finalists under the Innovations in Citizen Engagement and Dialogue category
Datuk Mohamad Roslan Sakiman helping to wheeladisabled resident in barrier-free Petaling Jaya. Pic by Nurul Shafina Jemenon
THE Petaling Jaya City Council (MBPJ) has been shortlisted as one of
the top three finalists for the
Posted: 02 Aug 2012 08:50 AM PDT
In view of the recent furore over everything National Day - from logo to theme song, I believe there comesatime when Malaysians need to define for themselves what it means to have national unity.
For me, this unity exists on political neutral ground, and should be as powerful as our Written Constitution.
This unity has nothing to do with Malays, Chinese or Indians uniting underaparticular party or coalition. This unity has nothing to do with whether Muslims, Buddhists or Christians unite underaparticular party or coalition.
This unity is one which transcends all of the above. It calls to our best side - one that is open, respectful, fair and just. It inspires us to bond as brothers and sisters, not make us fearful of "them" or "those others".
It reminds us that Malaysia is at its best when we value, and not fear, our diversity.
Inafunctional democracy, political battles are fought out on level playing field, and once victors are decided, people come together again.
But for BN, it'sazero sum game, played on the back ofaforked tongue about unity.
For every 1Malaysia, there is Perkasa huffing and puffing the blow the house down.
For every peace-loving protestor, there's FRU, Perkema, Rela, backside fellows and burger sellers.
For every ethical alternative journalistic outlet, there's Utusan, the Star, NST, TV1, TV2, TV3, NTV7, TV8, TV9, and Bernama.
For every decent school that inculcates genuine national unity, there's Biro Tata Negara.
For every sports that achieve international success, there's either the PM or his wife to rub their faces in.
For every commercial success story, there are horrid exposes of crony concessions and procurement overpayment.
For every true case of administration of justice, there is selective prosecution and investigation.
For every complaint about increasing crime rate, there's denial and indefensible statistics and assumptions.
For every good idea offered for free without consultation fee to the government, there's the usual put down after taking into account self interests.
To me, BN fails on all scores when dealing with national unity in true sense of the word. It's nothing short of embarrassing, and I don't want to feel this way anymoreayear from now. Instead, I want to look forward to the day when the only news about Malaysia is how happy we are with our neighbours, how everyone is able to collaborate with everyone else, how safe we are on the streets, how we are able to tap into the best minds to lead our institutions, how our innovation, sports and culture are flourishing and beating the world.
Help Pakatan make this happen. They are not perfect, but all we need is to cementa2 coalition system, end hegemony, and have real political competition to bring out the best of Malaysia.
Posted: 02 Aug 2012 08:30 AM PDT
These days I spend my time on the road driving from one end of Penang to the other not because I have takenanew job asachauffeur but because my cousin gave meagift of one year's membership at the latest fitness centre in town. The other day I attended belly dancing class with Beatrice and then Step Class with Francis. This evening, I had my first experience at the Zumba class led by Amy and I absolutely LOVE it!!!
According to the official Zumba site, Zumba is "an exhilarating, effective, easy-to-follow, Latin-inspired, calorie-burning dance fitness-party that's moving millions of people toward joy and health." It was created by Alberto "Beto" Perez in the mid 1990's.
Beto's life took an unexpected turn one fateful day in the mid-'90s when he darted off to teach an aerobics class and forgot his traditional aerobics music. He improvised using his own mix of music from tapes he had in his backpack (salsa and merengue music he grew up with). Spontaneously he createdanew kind of dance-fitness, one that focused on letting the music move you (instead of counting reps over the music). Energy electrified the room; people couldn't stop smiling. His class loved it! And on that day,arevolutionary new fitness concept was born – the Zumba Fitness-Party. Click here to read more about about Zumba.
It did not matter to me that I was the oldest student in the class. What mattered was that the teacher was havingagreat time dancing away and teaching us so exuberantly. Initially, I was right at the back of the studio as I was 10 minutes later. After the first two sets, I re-positioned myself right in front of the platform as the other students only occupied the second half of the studio. And why? I was still wearing my reading glasses and had forgotten to change to my multi-focal lens. When I could see more clearly, boy oh boy - I had the time of my life in such an exhilarating workout dancing to zesty Latin music withacombo of Latin dances including salsa, merengue, cha-cha, rhumba, cumbia and reggaeton.
I cannot begin to tell you how in that class set me onacaloric burning, heart-pounding, muscle pumping, body energizing movements that not only set my adrenalin rush but also helped me to harvest loads of endorphins to give me that feel good feeling.
I had so much fun grooving to the beat of the pulsating music, doing shimmeys, hip-hop moves, swaying salsa style - jumping, hopping, wriggling and dancing away. Throughout the class, I did not feel tired at all but stopped in between to drink water. The minute the music stopped, tiredness crept in and as I type this, I can feel my back achingabit and I know I will be sore all over tomorrow morning but it is WORTH IT!!!
Of course I was soooooo hungry after the class but I only had4oatmeal biscuits for dinner andaglass of Horlicks with no sugar. Indeed I am so glad that the fitness centre has FIVE Zumba classes per week i.e. on Monday morning and evening, Thursday evening, Saturday 5p.m. and Sunday at 3p.m. That means after my 3pm Zumba class, I will continue with Francis' Step Class!
If you have yet to joinafitness centre, please do so and don't forget to attend Zumba classes! Thanks to my dear cousin, the gift of gym membership has done wonders for my stamina, skin and exuberance. I feel (and hopefully look) five years younger and it is fun to be with younger people instead of with my laptop most of the time. :-)
To give an idea of what Zumba is all about and why I love it so much, here's the top Youtube video clip with 26.7 million views! I have always loved Latin dances, Latin music and culture and Zumba has definitely reinforced my love for Latin culture!
Hopefully, I can have washboard abs by the end of this year and be able to wear such Zumba workout gear!
Here's another energetic Zumba video:
Posted: 02 Aug 2012 08:34 AM PDT
PKR sets up centre to protect whistleblowers but there is one Whistleblower that needs no protection - hence, he needs no introduction. In 2010, he wrote 'How playing golf with the Prime Minister can earn you billions'.
On7July 2011, he wrote 'See what playing golf with Najib can do for you'. Three weeksalater, he again wrote 'Tan Kay Hock under the spotlight, again'. As if to add on to what this Whistleblower wrote, another whistleblower wrotealetter to him on 31 July 2011. It was entitled 'Let me tell you more about Tan Kay Hock'.
To cap off the "Tan Kay Hock's year 2011", yet another whistleblower wrote 'And the Winner is.... Tan Sri Tan Kay Hock...!!!'
Finally, after almost two years since the first exposé on Tan Kay Hock, this Whistleblower wrote on 22 June 2012, 'And what did I tell you?'
Posted: 02 Aug 2012 07:09 AM PDT
Tiffany Hwang of Korean pop group Girls' Generation is featured on August 2012 issue of Ceci Magazine [Kr] withapinkish theme. The birthday girl is celebrating the occasion (Aug 1) withacharity campaign – where selected fashion items from the photoshoot will be auctioned to fund an animal rights organisation in Korea.
SNSD Tiffany Ceci Magazine from YeinJee's Asian Journal
Posted: 02 Aug 2012 07:14 AM PDT
အစ္စလာမ်ဘာသာအရ ကမ္ဘာ့အိမ်ထောင်စုကြီးတစ်ခုလုံးသည် မိသားစုကြီးဖြစ်ရာမွတ်စလင် တစ်ဦးအဖို့ ကမ္ဘာ့ အိမ်ထောင်စုအတွင်း၌ သူစိမ်းဟူ၍ တစ်ဦးတစ်ယောက်မျှပင်မရှိပေ။
အားလုံးတို့သည် မိသားစုများဖြစ်ကြပေရာ အချင်းချင်း အကျိုးပြုရမည်သာဖြစ်၍ ဒုက္ခမပေးရ။
"မွတ်စလင်သည် မိမိ၏နှုတ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လက်ဖြင့်လည်းကောင်း မည်သူကိုမျှ ဒုက္ခမပေးရ။
မိမိအဖို့ နှစ်ခြိုက်သောအရာကို သူတစ်ပါးအဖို့ မနှစ်ခြိုက်သောသူသည် မွတ်စလင်မဟုတ်။
အိမ်နီးချင်းကို ဒုက္ခပေးသူသည် မွတ်စလင်မဟုတ်။
အသင်တို့သည် ကမ္ဘာမြေ၌ရှိသူတို့အား သနားကြင်နာကြကုန်။
ကောင်းကင်ထက်ရှိတော်မူသော အရှင်သည်အသင်တို့အား သနားကြင်နာတော်မူအံ့။"
Shared from the FB of M Thit Sar
PI Bala: Mereka cuba rasuah saya... lagi
Penyiasat persendirian P Balasubramaniam muncul daripada persembunyian dan membuat satu lagi pendedahan yang menggemparkan - bahawa terdapat percubaan kedua untuk merasuahnya ketika dia berada di India, kali ini untuk memburuk-burukkan Ketua Umum PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim.
Bercakap kepada Malaysiakini dalam temubual di Kuala Lumpur bulan lepas, Balasubramaniam mendakwa dia didatangi kira-kira seminggu sebelum pilihan raya Sarawak pada April tahun lepas.
"Anda tahu semua ini, mereka sudah mendapat 'berita baik' dari Perth dan mereka memerlukan lagi 'berita baik' dari India," kata Balasubramaniam, tetapi enggan mengulas lanjut.
Pada masa itu, jentera kempen kedua-dua belah parti politik mencapai kemuncaknya dan apa sahaja digunakan untuk menarik pengundi dalam pilihan raya negeri yang penting itu.
Ia juga sekitar masa temubual Raja Petra Kamaruddin dengan TV3, yang dibuat semasa lawatan kontroversi penulis blog itu ke Australia, disiarkan.
Dalam temubual itu yang turut disiarkan oleh stesen TV arus perdana, Raja Petra menafikan akuan bersumpah (SD) yang menghubungkan isteri Perdana Menteri, Datin Seri Rosmah Mansor dengan kes pembunuhan Altantuya Shaariibuu.
Raja Petra, yang hidup dalam buangan di United Kingdom, menyebut bahawa SD itu berdasarkan maklumat 'disemai' oleh pemimpin PKR yang terdesak untuk menghalang Najib, yang ketika itu timbalan perdana menteri, menggantikan Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi. -mk
RM200,000, banglo di London jika Bala sedia fitnah Anwar
KUALA LUMPUR: Penyiasat persendirian penuh kontroversi P Balasubramaniam (gambar), yang satu ketika dulu pernah membuat2kenyataan bersumpah mengenai kes pembunuhan Altantuya, kembali menceritakan bagaimana beliau memperdayakan sogokan kali kedua sebelum pilihanraya negeri Sarawak.
Dalam temubual eksklusif bersama Malaysiakini, Bala berkata beliau cuba disogok seminggu sebelum pilihanraya negeri Sarawak oleh orang-orang yang mengugut beliau.
Beliau akan dibayar sejumlah wang untuk membuat kenyataan bersumpah kedua oleh ahli perniagaan Deepak Jaikishan dan seorang anggota polis bernama Sureh.
Kenyataan bersumpah kedua beliau adalah untuk menidakkan kenyataan bersumpah pertama beliau yang mengaitkan perdana menteri Datuk Seri Najib Razak dengan pembunuhan Altantuya dengan mendakwa beliau membuat kenyataan bersumpah itu dalam keadaan tertekan.
Bala telah melarikan diri bersama keluarga ke India selepas kenyataan kedua dibuat.
Dalam sogokan terbaru sebelum pilihanraya negeri Sarawak, Bala berkata beliau disuruh membawa satu kenyataan untuk memburuk-burukkan Ketua Umum PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan mendakwa beliau dibayar oleh Anwar dan pemimpin PKR untuk membuat kenyataan bersumpah pertama yang mengaitkan Najib.
Ketika itu juga, blogger kontroversi Raja Petra Kamaruddin turut muncul di kaca TV3 dalam satu temubual di Australia menyerang Anwar.
Menurut Bala, beliau dihubungi Deepak dan Suresh melalui kawannya Siva.
Suresh, kata Bala terus mengganggu isterinya setelah diberitahu bahawa beliau tidak berminat berjumpa dengan sesiapa.
Atas nasihat peguamnya, Americk Sidhu yang menyuruhnya cuba untuk mendapatkan apa-apa bukti untuk perlindungan diri, Bala bersetuju bertemu dengan Deepak dan Suresh.
"Ini deal kita: RM200,000 cash dan sebuah kondo di Berjaya Times Square dan selepas ini semua ok, dan kita akan bagi kamu kembali dan kemungkinan akan bagi kamu satu projek," kata Suresh kepada Bala.
Bala berkata sebagai balasan, beliau perlu membuat satu video dengan membaca satu kenyataan yang disediakan.
Kandungan kenyataan itu antaranya berkata beliau didekati Anwar untuk membuat penafian dalam kenyataan bersumpah kedua kerana diyakinkan bahawa Anwar akan menjadi perdana menteri sekejap masa lagi.
Anwar pula akan dikatakan telah membayarnya RM200,000 dalam bag dan RM50,000 setiap bulan.
Setelah beberapa ketika, Bala akhirnya membuat video tersebut ketika berseorangan dengan Deepak.
Suresh kemudian telah memasukkan RM100,000 ke dalam akaun isterinya, dan kemudian melalui Siva, Deepak dan Suresh juga memberikan satu salinan belian dan jualan sebuah kondo di Berjaya Times Square.
"Video itu telah selesai. Dan saya hanya perlu menghantarnya. Tapi saya menghantarnya ke peguam saya.
"Semasa Deepak hubungi saya, saya memohon maaf kerana tertekan butang yang salah dan terhantar ke peguam saya," jelas Bala mengenai bagaimana beliau memperdaya Deepak dan Suresh.
Deepak melenting seperti yang dijangka – dan Bala telah merakam percakapan terakhir beliau dengan Deepak.
Ketika ditanya Malaysiakini adakah perkara itu disengajakan, Bala mengaku ya.
Bala berkata, beliau telah hilang segala-galanya ketika melarikan diri ke India dan ibunya meninggal ketika beliau berada di India.
Hanya selepas Najib menjadi perdana menteri, Bala berkata beliau dibolehkan membuat lawatan rahsia kembali ke tanahair.
Apabila ditanya mengenai perbualan telefon tersebut, Bala berkata beliau menyimpannya untuk keselamatan diri. -HD
Posted: 02 Aug 2012 07:00 AM PDT
Source: ရခိုင်မှာ မွတ်စလင်လူနည်းစုကို ပစ်မှတ်ထား ဟု Amnesty သတင်းထုတ်ပြန်
မြန်မာပြည် အနောက်ဘက် ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ အစိုးရက မာရှယ်လောထုတ်ထားတာ ခြောက်ပတ်ကျော် ကြာခဲ့ပြီဖြစ်သော်လည်း မွတ်စလင်လူနည်းစုအပေါ် ပစ်မှတ်ထား ရိုက်နှက်၊ သတ်ဖြတ်၊ အဓမ္မကျင့်မှုများ အမြောက်အများဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ Amnesty International အဖွဲ့က ထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှ ခိုးဝင်လာသူများလို့ စွပ်စွဲခံထားရပြီး နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်မရှိတဲ့ အဖိနှိပ်ခံ မွတ်စလင်လူနည်းစုကို အာဏာပိုင်များကသာမက ဒေသခံ ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များကပါ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်နေကြောင်းလည်း Amnesty International အဖွဲ့က စွဲချက်တင်လိုက်ပါတယ်။
မေလ နှောင်းပိုင်းက စတင်ဖြစ်ပွါးခဲ့တဲ့ ဥပဒေဘောင်မဲ့ သတ်ဖြတ်မှုကတဆင့် ရခိုင်ပြည်နယ် ကမ်းရိုးတမ်းဒေသတလျောက် ဒီသွေးထွက်သံယိုမှုကြီးက တမုဟုတ်ချဉ်း ကူးဆက်ခဲ့ပါတယ်။
ဇွန်လ ၁၀ ရက်မှာ အစိုးရက အရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာပြီး အဓိကရုန်းအားဖြေရှင်းရန်နဲ့ ဘုန်းကြီးကြောင်းများ၊ ဗလီဝတ်ကျောင်းများကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ဆိုပြီး စစ်တပ်စေလွှတ်လိုက်ပါတယ်။ အစိုးရ အာဏာပိုင်များရဲ့ ပြောကြားချက်အရ အနည်းဆုံး လူ ၇၈-ဦး သေဆုံးပြီး အိုးအိမ် ထောင်ချီ မီးရှို့ပျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။
တင်းမာမှုများ လျော့ကျသွားပေမဲ့ အဓိကရုန်းက ဆက်လက်ဖြစ်ပွါးနေဆဲပါ။ Amnesty International အဖွဲ့ရဲ့ ပြောကြားချက်အရ အကြမ်းဖက်မှုများ တိုက်ခိုက်မှုများဟာ မွတ်စလင်လူနည်းစုကို ပစ်မှတ်ထား ပြုလုပ်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဘန်ကောက်အခြေစိုက် Amnesty အဖွဲ့ရဲ့ သုတေသီ Benjamin Zawacki က ပြီးခဲ့တဲ့ ခြောက်ပတ်အတွင်း အကြမ်းဖက်မှုများဟာ ယေဘုယအားဖြင့် မွတ်စလင်များနဲ့ အဓိကအားဖြင့် ရိုဟင်ဂျာလို့ခေါ်တဲ့ မွတ်စလင်လူနည်းစုကို ပစ်မှတ်ထား ပြုလုပ်နေကြောင်း Associated Press သတင်းဌာနသို့ ပြောပါတယ်။ အချို့ကို အာဏာပိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကပြုလုပ်တယ်၊ အချို့ကို ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များကပြုလုပ်ပြီး အာဏာပိုင်တွေက မျက်ကွယ်ပြုထားတယ်လို့ သူက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အစိုးရအရာရှိများကို ဒီကိစ္စမေးမြန်းစုံစမ်းဖို့ရာ ဆက်သွယ်လို့ မရပါဘူး။
ရဲတပ်ဖွဲ့အပါအဝင် စစ်တပ်က ဖမ်းဆီးထားတဲ့ ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်များ ရာပေါင်းများစွာရှိတယ်လို့ Amnesty အဖွဲ့က ထပ်မံပြောကြားပါတယ်။
Amnesty အဖွဲ့က သတင်းထုတ်ပြန်ရာမှာ ငြိမ်ဝပ်ပိပြားရေး၊ လုံခြုံရေးနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးများ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန် အရေးကြီးသော်လည်း ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်မှုများဟာ လူမျိုးခွဲခြား၊ တဖက်သတ်ပြုလုပ်နေတာ တွေ့ရကြောင်း၊ ဒါဟာ ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုနဲ့ လွတ်လပ်မှု အခွင့်အရေးများကို ချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းများ ပါဝင်ပါတယ်။
ဒီအကြမ်းဖက်မှုဟာ ဇွန်လအလယ်မှာ အဆိုးရွားဆုံး သွေးထွက်သံယိုဖြစ်ခဲ့ပြီး နှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်း အသေအပျောက်အများဆုံး လူမျိုးရေးအဓိကရုန်းဖြစ်တဲ့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာ ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်လူနည်းစုရဲ့ ကံကြမ္မာအခြေအနေကို နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းကတောင် စိုးရိမ်မှု မြင့်မားခဲ့ပါတယ်။
ယခုလ အစောပိုင်း UNHCR နဲ့ တွေ့ဆုံမှုမှာ မြန်မာသမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်လူနည်းစုကို တတိယနိုင်ငံများသို့ပို့ဆောင်ခြင်း သို့မဟုတ် ကမ္ဘာ့ ကုလသမဂ္ဂက ဒုက္ခသည်အဖြစ် လက်ခံစောင့်ရှောက်ခြင်းပြုရမယ်လို့ အဆိုပြု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ သို့သော် UNHCR အကြီးအကဲ Antonio Guterres က ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင် လူနည်းစုကို ပြန်လည်နေရာချထားဖို့ရာ အဖွဲ့အစည်းရဲ့ တာဝန်မဟုတ်ကြောင်း ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ အဆိုကို ပယ်ချခဲ့ပါတယ်။
၁၉-ရာစု ဗြိတိသျှကိုလိုနီခေတ် ကတည်းက မြန်မာပြည်မှာ အခြေချနေထိုင်ခဲ့သော်လည်း မြန်မာလူမျိုးအများစုက ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင် လူနည်းစုကို တရားဝင်နိုင်ငံသားအဖြစ် အသိအမှတ်မပြုကြပါ။ ၁၉၈၀ နဲ့ ၁၉၉၀ ခုနှစ်ကာလများမှာ ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်အများအပြား ဖီနှိပ်ညှင်းပန်းမှုများမှ လွတ်မြောက်ဖို့ရန် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှသို့ ထွက်ပြေးခိုလှုံခဲ့ကြရတာဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းပြန်လာတဲ့အခါ တရားမဝင် ခိုးကူးဝင်ရောက်လာသူတွေလို့ စွပ်စွဲသတ်မှတ်ခြင်း ခံခဲ့ရပါတယ်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံကလည်း သူတို့ကို နိုင်ငံသားအဖြစ် လက်မခံဘဲ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရာစုပေါင်းများစွာ နေထိုင်လာခဲ့ကြတဲ့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံက နိုင်ငံသားများအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုသင့်ကြောင်း သာအစဉ်တစိုက် ၄င်းတို့ ပြောဆိုနေခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင် ဦးရေ ၈-သိန်းရှိကြောင်း ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂက ခန့်မှန်းပါတယ်။ ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်များဟာ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ၊ မလေးရှားနိုင်ငံများသို့ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ဖို့ ကြိုးပမ်းကြပါတယ်။ လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းများက ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်များဟာ အဓမ္မခိုင်းစေခြင်းများခံရပြီး အမျိုးသမီးများဟာလည်း အကြမ်းဖက်ခံရခြင်းအပြင် လက်ထပ်ခွင့်၊ ကလေးမွေးဖွားခွင့်၊ ခရီးသွားလာခွင့်များ ထိန်းချုပ် ပိတ်ပင်ခံထားရကြောင်း ပြောကြပါတယ်။
Amnesty အဖွဲ့က မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်များကို နိုင်ငံသားအဖြစ် လက်ခံဖို့ တောင်းဆိုထားပါတယ်။ ဒီကိစ္စကို မြန်မာအစိုးရက ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဆန့်ကျင်ပြီး ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်များဟာ မြန်မာပြည်ရဲ့ ဌာနေဇာတိဖွားတွေ မဟုတ်ဘူးလို့ လို့သာ တောက်လျောက်သုံးစွဲခဲ့ပါတယ်။
Amnesty အဖွဲ့ရဲ့ သုတေသီ Benjamin Zawacki က နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေး ဥပဒေနဲ့ စံနှုန်းများအရ မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မှာ နိုင်ငံမဲ့အဖြစ် လစ်ကျန်မနေရလို့ ပြောပါတယ်။ ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်များကို နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့် မပေးခြင်း၊ သူတို့အား နည်းလမ်းပေါင်းများစွာဖြင့် နှိပ်ကွပ်ထားခြင်းများနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုမှတ်တမ်းဟာ အတော်ကို ကြာညောင်းခဲ့ပြီလို့ Zawacki က ပြောလိုက်ပါတယ်။
မောင်စီမံ (မဟာသိပ္ပံ) ဘာသာပြန်သည်။
Amnesty International said Abuse Against Myanmar's Rohingya Erodes Recent Progress (drkokogyi.wordpress.com)
Myanmar's Rohingyas being targeted: Amnesty International (todayonline.com)
Posted: 02 Aug 2012 06:06 AM PDT
My cravings have been onaroller coaster journey lately. One minute I would love Italian, the other minute I would love to have authentic Malaysian, and the very next minute I would taste some tiramisu on my tastebuds. It'sawild, wild, west for my diet.
On Tuesday evening, I decided to make my own mixed grill with lamb chop as the main part of the dish. I marinated the lamb chop with Rosemary leaves, salt, black pepper, thyme leaves and onion powder for about2hours before I grill-fried them in the non-stick pan.
Isn't the it mouthwatering to stare at this picture? I also added some Crispy crowns,abeef frank, some crispy bacon and healthy salad to go with my lamb.
Oh well, let's see what I am craving for tonight.
Posted: 02 Aug 2012 06:15 AM PDT
One important concept, that helps you haveahealthy sense of self-acceptance and self-esteem, is the knowledge that you are perfect, right now, just the way you are. This is true regardless of your problems, early childhood issues, body, I.Q., mistakes, etc. Consideranew definition of perfection which includes all of your imperfections. This is an important seed thought to hold in your mind as you go forward in life growing into your full potential Self. Accepting the truth of your beauty and perfection is best illustrated by looking at an acorn. Inaminute I will share with you how the sprouted acorn became my business symbol and logo. First, let me explain more about the perfection of the acorn which makes italittle easier to apply this concept of your beauty and perfection to yourself.
The acorn inside its hard shell holds the seed with the potential to grow intoafull oak tree. When the conditions are right, it breaks free and begins its life journey. We would not look at one acorn and say it isagood acorn and look at another and say it isabad one. They are all good and perfect being acorns, as the seed grows it isaperfect expression of its self at every phase of its life. It is no less worthy asaseed with all its potential hidden from view than asagiant tree in full stature. All along the acorn's life path, asaseedling,asmall tree,abig tree, andagiant tree, it is perfect; it is being who and what it is capable of being at every moment. Even though it is capable of growing more at each stage of its life, the acorn is stillabeautiful expression of its Self at every stage. And you, like the acorn, areabeautiful expression of your Self at every stage of your life journey.
Most of us do not accept this idea very readily. We judge ourselves harshly for certain choices we have made, feeling shame that we have made mistakes, which to us proves we are not perfect. The irony is you are perfectly being you, learning and evolving with each and every choice you make, mistakes and unwise choices included. Your perfection includes your imperfections.
Posted: 02 Aug 2012 05:27 AM PDT
Korean fitness machine "ridiculed" on CNN's Anderson Cooper 360° show…
Korean horse riding fitness machine from YeinJee's Asian Journal
Posted: 02 Aug 2012 06:03 AM PDT
Subang Jaya – Polis mengedarkan fotofit seorang lelaki dipercayai warga Indonesia bagi membantu siasatan berhubungan kes rogol pekerja butik di SS15, 21 Julai lalu.
Gambar: Fotofit suspek yang merogol mangsa dicari.
Sementara itu, dalam perkembangan lain, Yahaya berkata, pihaknya memohon kerjasama orang ramai mengesan seorang lelaki warga Argentina bagi membantu siasatan kes pecah rumah dan melanggar kereta polis di USJ 18/2A pada 26 Julai lalu.
Dalam kejadian 9.25 malam itu, empat lelaki melarikan diri selepas melihat kereta peronda polis tiba di pekarangan rumah teres dua tingkat tersebut yang telah dipecah masuk.
"Kita minta orang ramai tampil memberi maklumat sekiranya mengetahui kedudukan lelaki dikenali Ignacio Marcelo, 45, yang masuk ke negara ini sebagai pelancong sejak Oktober lalu," katanya.
Posted: 02 Aug 2012 04:01 AM PDT
Three mice are sitting atatable inapretty rough neighborhood late at night trying to impress each other about how tough they are.
The first mouse turns to the second mouse and says, "When I seeamousetrap, I lie on my back and set it off with my foot. When the bar comes down, I catch it in my teeth, bench press it twenty times to work up an appetite, and then make off with the cheese."
The second mouse replies, "Yeah, well, when I see rat poison, I collect as much as I can, take it home, grind it up toapowder, and add it to my coffee each morning so I can get going for the rest of the day."
The third mouse lets outalong sigh and says to the first two, "I don't have time for this. I've gotadate with the cat."
Do these mice remind you of anyone?
Posted: 02 Aug 2012 05:04 AM PDT
Solidariti Anak Muda Malaysia (SAMM) mengutuk penahanan Pengarah Strategi PKR, Rafizi Ramli di bawah akta BAFIA ekoran pendedahan skandal Pusat Fidlot Kebangsaan (NFC) yang didedahkannya pada akhir tahun lalu.
"Ia satu cubaan regim untuk menggambarkannya sebagai seorang penjenayah walaupun beliau dengan penuh fakta sahih telah mendedahkan skandal NFC yang menyebabkan seorang menteri meletakkan jawatan".
"SAMM melihat ini sebagai sangat tidak wajar kerana sepatutnya Rafizi diberikan hadiah dan penghargaan oleh pihak kerajaan kerana telah menyelamatkan negara ini dari terus dirompak. Malangnya, hadiah buat Rafizi berupa sepasang gari bersama bon ikat jamin," kata SAMM dalam satu kenyataan.
NGO itu menambah, SAMM mengucapkan tahniah kepada Rafizi kerana imej penahanan bergari itu bukan sahaja mempopularkan beliau tetapi mempercepatkan usaha kejatuhan regim.
Menurutnya, jikapun apa yang dilakukan Rafizi secara teknikalnya mungkin salah namun percayalah ia berlaku kerana kegagalan pihak Suruhanjaya Pencegarhan Rasuah Malaysia (SPRM) dan pihak berkuasa bertindak apabila laporan di buat.
`Lindungi orang tertentu'
"Bagi SAMM, melindungi orang-orang tertentu dari golongan VIP dengan memberkas pihak pelapor yang mendedahkan jenayah dan rasuah adalah satu petanda betapa sistem perundangan negara berada dalam keadaan tenat".
"SAMM memberi jaminan sekiranya amalan seperti ini diteruskan oleh regim Barisan Nasional demi untuk melindungi jemaah menterinya yang banyak terpalit skandal rasuah dan penyelewengan, maka rakyat pasti menolak BN dalam pilihanraya umum akan datang dan bersedia untuk sebuah kerajaan baru yang lebih telus," katanya lagi.
SAMM mendakwa, terdapat impak negatif daripada tindakan penahanan Rafizi sama-ada orang awam akan tidak menghormati undang-undang lalu bertindak sendirian atau orang awam tidak lagi mahu tampil menjadi pelapor 'rompakan' ".
Katanya, sehingga hari ini, SAMM sebagai peneraju anak muda tidak melihat sebarang transformasi yang kononnya dijanjikan oleh Najib Razak dalam usaha memperbaiki sistem perundangan malah menjadi lebih teruk apabila regim panik dan terdesak setelah Rafizi Ramli melangkah untuk pendedahan terbaru yang melibatkan prasarana pengangkutan awam negara.
SAMM tidak mengharapkan apa-apa lagi dari pihak kerajaan, namun menyeru dan menggesa seluruh rakyat Malaysia membuka mata mencelik minda, memandang dengan mata hati apa yang berlaku hari ini akan terus berlaku.
Rakyat akan dimomokkan dengan tangkapan, diperas dan diugut supaya tidak campur tangan dalam urusan 'mereka' merompak khazanah negara".
Akhir sekali, untuk pengetahuan Peguam Negara yang diperkuda regim BN, ketahuilah bahawa siri-siri pendedahan skandal NFC telah diterbitkan sebagai risalah oleh pelbagai pihak dan sudah tersebar ke seluruh negara. Jika ia satu kesalahan, jangan lupa untuk mendakwa berjuta pihak yang terlibat. -FMT
Posted: 02 Aug 2012 02:36 AM PDT
Source: ရှစ်လေးလုံးမျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုကိုကြီးသို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ
ဤဆောင်းပါးကို MMV မှ ဆလိုင်းကိုတင်မောင်ဦးမိသားစု၏ တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် တင်ပြကြောင်း စာရှုသူများအား အသိပေးအပ်ပါသည်။
ရှစ်လေးလုံးမျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုကိုကြီးရှင့်
ကျမကတော့ ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှု၊ လူထုဆန္ဒပြပွဲတွေကို ဦးဆောင်ရင်း စစ်အစိုးရရဲ့ကြိုးပေးကွပ်မျက်မှုခံလိုက်ရလို့ ကျဆုံးသွားတဲ့ (၁၉၇၄- ၁၉၇၆ မျိုးဆက်) ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် ဆလိုင်း ကိုတင်မောင်ဦးရဲ့ ညီမ မလှမြိုင် (ခေါ်) မိုင်ပိုပိုတင် ဖြစ်ပါတယ်။ ကျမတို့ မိသားစု အကြောင်းကို ကိုကိုကြီး ကြားဘူးကောင်း ကြားဘူးနိုင်ပါတယ်။ အနည်းငယ် ပြန်ပြီး မိတ်ဆက်ပါရစေ။
စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ဆန့်ကျင်တိုက်ပွဲ ၀င်ခဲ့တဲ့ အတွက် အကိုကြီးက သေဒဏ်၊ ကျမက ထောင်ဒဏ် (၉) နှစ်၊ ကျမ မောင် ကိုလှရွှေက ထောင်ဒဏ် (ရ) နှစ် ဘာမှ အပြစ်မရှိတဲ့ မိဘနှစ်ပါးက ထောင်ဒဏ် (၅) နှစ်စီ၊ မောင် အငယ် ဆုံး ကလေး မောင်သန့်ဇင်က နှိပ်စက်ညှင်း ပမ်းခံခဲ့ရ စသဖြင့် မိသားစု တစုလုံးဘ၀ပျက်ခဲ့ရတာ မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံ လုံးမှာ ကျမတို့ မိသားစု တစုဘဲ ရှိမယ် ထင် ပါတယ်။ ဒီလို ဘ၀ပေး အသိရရှိခဲ့တာကြောင့် စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို စက်ဆုပ်ရွံ မုန်းပြီး၊ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ဆန့်ကျင်တိုက်ပွဲဝင်တဲ့ ရဲရင့် သတ္တိရှိတဲ့ ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်တွေကို လေးစား ချစ်ခင်တဲ့နေရာမှာ ကျမတို့ ထက်သာသူ မရှိ ဘူးလို့ တောင် ပြောနိုင်ပါတယ်ရှင။် ကျမတို့မိသားစုဟာ ရှစ်လေးလုံးမှာ တတပ်တအား ဆက်လက်ပါဝင်ဆင်နွှဲပြီး ပြည်တွင်းမှာ နေလို့ မရတော့လောက်အောင်ကို အခြေအနေ ဆိုက်ရောက်လာတဲ့အတွက် ရှစ်လေးလုံးပြီးကထဲက ထွက်လာကြပြီး အခုတော့ ကနေဒါနိုင်ငံမှာ အခြေချ နေထိုင်လျှက်ရှိပါတယ်။
ကျမရဲ့ အကိုကြီး ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ဆလိုင်းကိုတင်မောင်ဦး ကျဆုံးတဲ့ နှစ်ပတ်လည်နေ့ ကို ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လ ၂၆ ရက်နေ့ တုံးက ရန်ကုန်မှာ စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာကျင်းပခဲ့ရာမှာ ဦးဆောင်သူတွေ ဖြစ်တဲ့ (အသက်ကြီးလှပြီဖြစ်ပေ မယ့် သတ္တိရှိစွာ လှုပ်ရှားဆဲဖြစ်တဲ့) သတင်းစာ ဆရာကြီး ဦးဝင်းတင်၊ ၁၉၆၂ ခုနှစ် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ဦးလှရွှေ၊ ၁၉၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင်နဲ့ အခြားခေါင်းဆောင်များအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပထမ ပြောချင်ပါတယ်။ အဲသည်ပွဲမှာ ဦးဆောင်ကျင်းပသူတွေ ဒါမှမဟုတ် တက်ရောက်သူတွေ ထဲမှာ ကိုကိုကြီးလဲ ပါရင် ကျေးဇူး တင်ပါရစေရှင်။
ရှစ်လေးလုံးအတွင်းမှာ ကိုမင်းကိုနိုင်၊ ကိုကိုကြီး စတဲ့ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေ ဦးဆောင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြတာတွေ၊၂၀၀၇ ခုနှစ် သံဃာ့လှုပ်ရှားမှုကြီး မတိုင်ခင် လူထုလှုပ်ရှားမှုကို စတင် ဦးဆောင်ခဲ့ကြတာတွေ၊ နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်တွေ ကျခံရင်း ထောင်ထဲမှာ ကောင်းမွန်စွာရပ်တည်ပြီး ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတာတွေ စတာတွေကို ကျမတို့ မိသားစု တစုလုံးက လေးစား အသိအမှတ်ပြုလျှက်ရှိဆဲပါ ရှင်။
အခုလူတွေ အတော်များများပြောနေကြတဲ့ အပြောင်းအလဲဆိုတာကို ကျမတို့ မိသားစုတစုလုံး မျက်ခြေ မပြတ်ကြည့်နေပါတယ်။ ကျမတို့ ကတော့ လုံးဝ မယုံဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အသွင်သဏ္ဍာန် အရသာ အရေခွံဟောင်းကို ခွာ၊ အေ၇ခွံအသစ်ကို ထပ်တင်လိုက်တာကလွဲလို့အနှစ်သာရ အရ ဘာမှ မပြောင်းဘူး။ ၁၉၆၂ ခုနှစ်တုံးက ကျောင်းသားသမဂ္ဂကို ဖြို၊ သားသမီးတွေလို သဘောထားရမယ့် ကျောင်းသားတွေကို သတ်ပြီး ဗိုလ်ချုပ် နေ၀င်းက ဓါးဓါးခြင်း လှံလှံခြင်း စိမ်ခေါ်ခဲ့တာ ကိုကိုကြီးမေ့သွားပြီလား။ ကိုကိုကြီး အမွှမ်း တင်ဘို့ အစချီလာတဲ့ တပ်မတော် ဆိုတာဟာ သည်အတွေး အခေါ်နဲ့ သည်အနှစ်သာရကို ဆက်လက်ကိုင် စွဲထားတာကို သတိမပြုမိဘူး လားရှင့်။ အခု ခဏကလေး
ဖုံးထားတဲ့ အချိန်မှာတောင် မအောင့်နိုင်ဘဲ ပြီးခဲ့တဲ့ ဆဲဗင်း ဇူလိုင် နှစ်ငါးဆယ်ပြည့်နေ့မှာ ကျောင်းသားတွေကို ကြက်ကလေး ငှက်ကလေးဖမ်းသလို ဖမ်းသွားခဲ့ တယ် မဟုတ်လား။ ဒါက စစ်အာဏာရှင်စနစ်ရဲ့ အစွယ်ကို တချက်လောက်ဘဲ လှစ်ပြလိုက်တာ မဟုတ်ပါလားရှင်။
အပေါ်ယံ အပြောင်းအလဲတွေ၊ လိုက်လျောမှုတွေ လုပ်ပြနေပေမယ့် စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဟာ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပေါ်တက်နင်းရပ်ပြီး အခုအချိန်မှာ ခိုင်ခိုင်မာမာဆက် တည်ရှိနေတယ် ဆိုတာ ကိုကိုကြီး သိမှာ မလွဲပါဘူး။ အဲဒါသာမကဘဲ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတွေ နဲ့ စစ်ဗိုလ်ချုပ်သစ်တွေကဘဲ တိုင်းပြည်အာဏာကို ဆက်လက်ချုပ်ကိုင်ထားတာကြောင့် လူသစ်တွေလဲ နေရာရသင့်တယ်ရယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်တောင် ပြောဆိုသွားခဲ့တာ ကိုကိုကြီးကြားမှာပါ။
ဒီလို နောက်ခံအခြေအနေအောက်မှာ ရိုဟင်ဂျာ ကိစ္စကြီး ဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ အဲသည် အပေါ်မှာ ကိုကိုကြီး တိုင်းသိ ပြည်သိ ပြောကြားလိုက်တဲ့ အောက်ပါ စကားတွေကို ကြားလိုက်ရတော့ ကျမတို့ အံသြတုန်လှုပ်သွားခဲ့တယ် ရှင့်။ ဒါကြောင့်လဲ ဒီ အိပ်ဖွင့်ပေးစာကို ရေးလိုက်တာပါဘဲ။
"ရိုဟင်ဂျာ ကိစ္စမှာ ကွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ တတ်နိူင်သမျှသည်းခံ ဆောင်ရွက်နေတဲ့ ကိစ္စသာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရိုဟင်ဂျာ ကိစ္စ ကို အခု အပြတ်ပြောပါမယ်။ ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသားလုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ အခုဖြစ်နေတဲ့ဘူးသီးတောင် မောင်းတောကိစ္စတွေမှာနိုင်ငံတကာ နိုင်ငံကြီးတွေက မြန်မာနိုင်ငံ ကိစ္စကို အပြည် အစုံနားမလည်ဘဲ ၀င်ရောက်ပတ်သတ် စွက်ဖက်နေတာကို လုံးဝလက်မခံပါဘူး.။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ အချုပ်ခြာကို ထိပါးတယ်လို့ ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ပါတယ်။ နိုင်ငံ တကာ နဲ့မျက်နာမပျက်အောင် ဒုက္ခသည်များလို့ ယူဆပြီး လူသားခြင်းစာနာမှု ကိုယ်ခြင်းစာနာမှု နဲ့ လိုက်လျောမှုကို နိုင်ငံကြီးတွေက ဖိအားပေးလာရင် ကျွန်တော်တို့လက်ခံမှာမဟုတ်ဘူး။ ဆက်ပြီးဖိအားပေးလာရင် ကျွန်တော်တို့ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေ အားလုံးက အမျိုးသားရေး ကိစ္စအဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး မြန်မာ့တပ်မတော် နဲ့ လက်တွဲဖြေရှင်းသွားမယ်..။"
"နိုင်ငံကြီး တွေက ဖိအားပေးလာရင် ကျွန်တော်တို့လက်ခံမှာမဟုတ်ဘူး။ ဆက်ပြီးဖိအားပေးလာရင် ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုတွေ အားလုံးက အမျိုးသားရေး ကိစ္စအဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး မြန်မာ့တပ်မတော် နဲ့လက်တွဲဖြေရှင်းသွားမယ်..။"
ကိုကိုကြီးရဲ့ အဲသည်စကားကို နားထောင်ပြီးတဲ့အခါမှာ ကိုကိုကြီးဟာ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို တကယ်ပြတ်ပြတ်သားသား ဆန့်ကျင်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ့် ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်တဦးမှ ဟုတ်ပါရဲ့လား ရယ်လို့ ကျမတို့ သံသယ ၀င်သွားခဲ့တယ် ရှင့်။ ကိုကိုကြီးလေမျိုးကို ကျန်တဲ့ကျောင်းသားတွေ အတုယူလာရင် စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို တော်လှန်တဲ့ကျောင်းသားတွေ ဖြစ်မလာဘဲ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို အကျိုးပြုတဲ့ ကျောင်းသားတွေ ဖြစ်သွားမှာ စိုးရိမ်မိတယ်။
ရှစ်လေးလုံးကာလ အတွင်းမှာ ဒီမိုကရေစီ ဖခင်ကြီး ဦးအောင်ကြီး သက်တော်ရာကျော် ရှည်ပါစေလို့ လူထုက တန်ဘိုးထား ကြွေးကြော်ခဲ့ရာကနေ ဦးအောင်ကြီးက "တပ်မတော်ကို စိတ်နဲ့တောင်မပစ်မှားနဲ့  " လို့ပြောခဲ့တဲ့ အတွက် လူထုက နိုင်ငံရေး မြောင်းထဲကို ပြန်ဆွဲချလိုက်တာ ကိုကိုကြီး သတိရစေခြင်ပါတယ်။ အခုအချိန်မှာ ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းသယောင်နဲ့ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို သာ ခိုင်မာအောင် လုပ်နေကြတာ မျက်မြင်ပါဘဲ။ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ဆန့်ကျင်တဲ့ တိုက်ပွဲတွေကို ပုံသဏ္ဍာန် မျိုးစုံနဲ့ဆက်ပြီး ဆင်နွှဲသွားအောင် ရှင်းလင်းတဲ့ အမြင်တွေ တင်ပေး၇မယ့်အစား စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ဒူးထောက်တဲ့ လမ်းကြောင်းကို ဦးတည်မယ့် စကားလုံးတွေကို ကျောင်းသားခေါင်း ဆောင်တဦး အနေနဲ့  မသုံးသင့်ဘူးလို့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောပါရစေရှင်။
၁၉၆၇ ခုနှစ် အာဏာရှင် ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်း ဖန်တည်းခဲ့တဲ့ တရုတ်မြန်မာ အရေးအခင်းတုံးက ကျမတို့ မိဘတွေရော ကျမအကိုကြီး ဆလိုင်း ကိုတင်မောင် ဦးပါ ကြုံခဲ့ပြီးပြီ။ ဆန်ပြသနာဖြစ်ပြီး စစ်တွေမှာ ဆန်လုပွဲတွေပေါ်တော့ ရခိုင်လူထုတွေကို စစ်တပ်က ရက်ရက်စက်စက် သေနတ်နဲ့ပစ်ခတ်နှိမ်နင်းခဲ့တာ ကိုကိုကြီးမေ့သွားပြီလား။ သို့ မဟုတ် ငယ်သေးလို့ များ မသိတာလား။ ဆန်ပြသနာ အရေးအခင်းကို အာရုံလွှဲခြင်တော့ တရုတ် ဗမာ အဓိကရုဏ်းဖြစ်အောင်နေ၀င်းက ဖန်တည်းခဲ့တယ်။ တရုတ်ဆန့်ကျင်ရေး ကြွေးကြော်သံတွေထုတ်၊ သူ့ လုံခြုံရေး အဖွဲ့ လက်ပါးစေတွေ ကို
အရပ်ဝတ်လဲ၊ အခြေမဲ့အနေမဲ့လူရမ်းကားတွေကို မြှောက်ပေး၊ တရုတ်အိမ်တွေကို ၀င်ရောက် မီးရှို့ဖျက်ဆီး (တချို့သတ်ဖြတ်တာတွေပါ) လုပ်ကြတော့ မီးသတ်ကားနဲ့ စစ်တပ်က လူအုပ်ကြီး နောက်က လိုက်ပေးတယ်။ ဘာမှ မတားဆီးဘူး။ အရေးမယူဘူး။ အခြားအိမ်တွေ မလောင် အောင်သာ မီးငြိမ်းပေးတယ်။ တရုတ်မိသားစုတွေကို သတ်ဖြတ်၊နှိပ်စက်၊ တရုတ်အိမ်တွေ မီးရှို့တဲ့ လူရမ်းကားတွေ အပေါ် ဘာမှ ထိထိ ရောက် ရောက် အရေးမယူခဲ့ဘူး။
ကျမ အကိုကြီး ဆလိုင်းကိုတင်မောင်ဦး ဆိုရင် အဲသည်တုံးက သူ့ အသက် (၁၆) နှစ်ဘဲရှိသေးတာပေါ့။ အသက်ဘေးကနေ လက်လွတ်ထွက်ပြေးကြရတဲ့ တရုတ်မိသားစု တစုကို ဘုန်းကြီးကျောင်းထဲမှာ ၀ှက်ပြီး ကယ်ခဲ့သေးတယ်။ တရုတ်တွေ အပေါ် လူမျိုး မတူတာ အပထား၊ လူသားချင်း စာနာစိတ်နဲ့ (ဘာပြစ်မှုမှ မကျူးလွန်တဲ့ လူတွေရဲ့) လူ့အသက်တွေကိုတော့ကယ်တင်သင့်တယ် ဆိုတဲ့ ခံယူချက်နဲ့ ကိုတင်မောင်ဦး သည်လို လုပ်ဆောင်ခဲ့တာ ဖြစ်တယ်ရှင့်။ စစ်အာဏာရှင်တွေက လူမျိုးရေး အဓိကရုဏ်းတွေဖြစ်၊ တိုင်းပြည်မတည်မငြိမ်အောင် သူတို့ ဘဲဖန်တည်းပြီး လက်နက်အားကိုးနဲ့အုပ်ချုပ်ခွင့်၇အောင် အဲသည်လို လုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ ကိုကိုကြီးပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ သည်လိုမျိုးဖြစ် မှာ ကျမတို့ သိတ်ကို စိုးရိမ်တယ်။ ဖြစ်သွားခဲ့ပြီ လို့ လဲ ယူဆတယ်။
ကျမတို့ က ရိုဟင်ဂျာတွေ ဘက်က သတ်ဖြတ်ကျူးလွန်မှုတွေ မရှိဘူးလို့ ဘက်လိုက်ပြီး ခုခံကာကွယ်ပြောဆိုနေတာမဟုတ်ဘူးရှင့်။ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေ မီးရှို့ခံရတာတွေ ရှိသလို ဗလီတွေ ဖျက်ဆီးခံရတာတွေ ရှိကြောင်းကြားရတယ်။ ပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့ နှစ်ဘက်လုံးကို ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူပေါ့။ အဲသလို မဟုတ်ဘဲနဲ့ အမျိုးသားရေး ကိစ္စဆိုပြီး ရိုဟင်ဂျာတွေကိုသာကွက်ပြီး သတ်ဖြတ်တာ၊ နှိပ်စက်တာ၊ လူမဆန်တဲ့ အပြုအမူတွေ ပြုကျင့်မယ်ဆိုရင်တော့ ကျမတို့လက်မခံနိုင်ဘူး ရှင့်။ ကိုကိုကြီး သုံးနှူံးသွားတဲ့ စကားလုံးအသုံးအနုန်းတွေဟာ သည်လိုမတရားတာတွေ ပြုကျင့်စေဘို့ အားပေးရာ ရောက်တာမျိုး မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ပြောပါရစေ။
ကိုကိုကြီး အပါအ၀င် ပြည်တွင်းကလူထုတွေ တကယ့်အများစုကြီးဟာ ဆယ်စုနှစ်တချို့လောက် ပြင်ပကမ္ဘာနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်ခံထားခဲ့ရတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံလိုဘဲ စစ်အာဏာရှင် လွှမ်းမိုးကြီးစိုးခဲ့တဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကိုထွက်ပြီးလေ့လာကြည့်ပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အခု လူထုတွေ အများစုကြီးက အပြောင်းအလဲလို့ယူဆနေကြတဲ့ အနေအထားတွေဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၅ နှစ် လောက်က (၁၉၉၇ ခုနှစ်အထိ) အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာ အာဏာရှင် ဆူဟာတိုက ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ Guided Democracy လို့ ခေါ်တဲ့ လမ်းညွှန် ဒီမိုကရေစီ အောက်က ရခဲ့တဲ့ ဒီမိုကရေစီ အခွင့်အရေးကို တောင်မမှီသေးဘူးရှင့်။ အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာ အာဇာနည်နေ့မှာ ဆန္ဒပြခွင့်ကလေးတွေ ရလာတာကို လူထုတွေက ကျေးဇူးတင်နေကြရတဲ့အဆင့်ဘဲရှိသေးတယ်။ သည့်ထက်သာတဲ့ အခွင့် အရေးမျိုးတွေကို အင်ဒိုနီးရှားမှာ အာဏာရှင် ဆူဟာတို ရှိစဉ်ကထဲက ရခဲ့
တာပါ။ တကယ်တော့ အနှစ်သာရအရ ဘာမှ မပြောင်း လဲသေးဘူးဆိုတာရှင်းနေပါတယ်။
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ရသမျှ အခွင့်အရေးကလေးတွေကို ယူပြီး စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို တောက်လျှောက်ဆန့် ကျင်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ တဲ့ အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ မြေပေါ်တော်လှန်ရေးသမားကြီးတွေ၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ဟောင်းကြီးတွေ၊ ၁၉၆၂ ခုနှစ်ကျောင်းသားခေါင်း ဆောင်ဟောင်းကြီးတွေက အချင်းချင်း အပြန်အလှန် စုစည်း စည်းရုံးနေကြတာတွေ၊ ကိုမင်းကိုနိုင်၊ ကိုကိုကြီးတို့ ခေါင်း ဆောင်တဲ့ ရှစ်လေးလုံးမျိုး ဆက်ကျောင်းသားတွေက တပြည်လုံး ထွက်၊ စည်းရုံးလှုပ်ရှားနေကြတာတွေ၊ ကိုကျော်ကိုကို ခေါင်းဆောင်တဲ့ ဗကသ ကျောင်းသားတွေက တပြည်လုံးမှာ ဗကသ တွေ ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းဘို့ လုပ်နေကြတာတွေ၊ ဒါတွေ အားလုံးကို ကျမတို့ လုံးဝ တန်ဘိုး ထား အသိအမှတ်ပြုပါတယ်။ အခက်အခဲတွေ
အကြားကနေ လုပ်နေကြရတဲ့အခြေအနေကိုလဲ သဘောပေါက်ပါရဲ့ရှင်။
ဒါပေမယ့် တချိန်ထဲ မှာ လူထုတွေကျောင်းသား တွေကို အခြေအနေမှန်ကို အမှန်အတိုင်း အသိပေးဘို့ ၊ မြှော်လင့်ချက်အမှားတွေ ရှိမလာ စေဘို့ ၊ နိုင်ငံရေး အရ လမ်း ကြောင်းချော်သွားစေမယ့် အပြောအဆို မျိုးတွေ မပြောမိစေဘို့ရိုးရိုးသားသား အကြံပေး ခြင်တာကြောင့် သည်စာကို ရေးလိုက် တာပါဘဲရှင်။
"ကျွန်တော်တို့ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုတွေ အားလုံးက အမျိုးသားရေး ကိစ္စအဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး မြန်မာ့တပ်မတော်နှင့် လက်တွဲဖြေရှင်းသွားမယ်.."လို့ ကိုကိုကြီး ပြောသွားခဲ့တယ်။ "ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုတွေ အားလုံးကလို့" ကိုကိုကြီး ဘာကြောင့်သုံးသွားတာလဲ။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်သဘောဆန္ဒလဲ တိတိကျကျ ထုတ်ဖေါ်တာ ဘာမှ မကြားရသေးဘူး။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဖွင့်ပြောတာလဲ နားထောင်ခွင့်မရသေးဘူး။ ရိုဟင်ဂျာတွေက ရခိုင်လူထုအပေါ် သတ်ဖြတ်တာ၊ နှိပ်စက်ညှင်းပမ်းတာ၊ ရွာတွေ မီးရှို့တာ၊ ရှိရင် အဲဒါတွေ အားလုံးကို ကျမတို့ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ရှုံ့ချတယ်။ ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူဘို့လဲတောင်းဆိုတယ်။
ဒါပေမယ့် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ရော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပါ ရိုဟင်ဂျာနဲ့ ရခိုင်လူထုတွေ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ လူမျိုးရေး အသွင် ဆောင်တဲ့ ပြသနာမှာ အမျိုးသားရေးလို့ သတ်မှတ်တယ်ဆိုပြီး ဘက်တဘက်ထဲကဘဲရပ်၊ ရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ် သတ်ဖြတ်ခြင်သလိုသတ်ဖြတ်၊ ရက်စက်ခြင်သလို ရက်စက်၊ လူသားချင်းစာနာထောက် ထားတဲ့အခြေခံကနေ အသက်ရှင်ရပ်တည်လို့တောင် မရအောင် ခံစားနေကြရတဲ့ အခြေ
အနေမျိုးဖြစ်စေမယ် ဆိုရင် တော့ ဒါကို လျှစ်လျှရှုထား၊ မသိခြင်ယောင်ထားပြီး ထောက်ခံတဲ့ သဘောနဲ့ နေလိမ့်မယ်လို့ကျမတို့ တော့မထင်ဘူးရှင့်။
ပြီးတော့ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုတွေ အားလုံးက လို့ ကိုကိုကြီး သုံးသွားတာ ကျမတို့ လို မလွှဲသာလို့ တိုင်းပြည် ပြင်ပရောက်နေကြတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊ အင်အားစုတွေ၊ နိုင်ငံတကာမှာ ရောက်နေကြတဲ့ ဒီမိုကရေစီ ရေးလှုပ်ရှားတက်ကြွတဲ့အဖွဲ့ အစည်းအသီးသီးတွေ ကို ထည့်မတွက်တော့ဘူးလား ရှင့်။ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုတွေ အားလုံးကို ကိုယ်စားပြုပြီး ပြောခြင်ဆိုခြင်တယ် ဆိုရင် သူတို့ သဘောထားဆန္ဒကို ကြိုတင်မေးဘို့ မလိုဘူးလား။ ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊ အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးဟာ ကိုကိုကြီးတို့ ထောင်ထဲမှာ ရှိနေတုံးက နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေလွှတ်ပေးဘို့ ကမ္ဘာပတ်ပြီး တောင်းဆို၊ စစ်အစိုးရကို ဖိအားပေးခဲ့ကြသူတွေပါ။ သူတို့ သဘောဆန္ဒကိုရော အလေးမထားသင့်ဘူးလား။ သူတို့ သဘောဆန္ဒကိုလဲ မယူဘဲနဲ့ ကိုကိုကြီးနဲ့ နီးစပ်သူ တချို့လောက်ရဲ့ သဘောထားနဲ့ဘဲ ဘာကြောင့် အမျိုးသားရေး ကိစ္စဆိုပြီးသတ်မှတ်လိုက်တာလဲရှင့်။ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေအားလုံးက သတ်မှတ်တယ် ဆိုရင်ရော ဒါဟာအမျိုးသားရေးကိစ္စဖြစ်သွားပြီလား။ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ဆန့်ကျင်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး အဖွဲ့တွေ ရဲ့ ဆန္ဒကို မယူသင့်ဘူးလား။ သူတို့ သဘောမပါဘဲနဲ့ ဦးသိန်းစိန် ဦးဆောင်တဲ့ စစ်အစိုးရသစ်နဲ့ သဘောထားခြင်းတူရုံနဲ့ အမျိုးသား
ရေးကိစ္စလို့သတ်မှတ် လို့ရပါ့ မလားရှင့်။
အခု ရိုဟင်ဂျာ ရခိုင်အရေးအခင်းမှာ တာဝန်အရှိဆုံးက ဘယ်သူလဲ။ ကိုကိုကြီး စဉ်းစားကြည့်ပါ။ လက်ရှိ တက်နေတဲ့သမတ ဦးသိန်းစိန် နဲ့ သူ့အောက်က ပြည်နယ် အုပ်ချုပ်ရေး အာဏာပိုင်တွေဘဲ။ တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်နေရင်ကိုယ့်လူထုအကြောင်းကို ကိုယ်သိရ မှာပေါ့။ ရိုးရိုးသားသား ဖြစ်ဦးတော့ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဒါမျိုးဖြစ်လာရင် လူမျိုးရေးပဋိပက္ခဖြစ်သွားနိုင်တယ် ဆိုတာ ကလေး က အစသိတယ်။ ဖြစ်ဖြစ်ခြင်း ဘယ်ဘက်ကဘဲ ကျူးလွန်ပါစေ၊ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူနှစ်ဖက်လုံးကို ချက်ခြင်း အရေးယူ၊ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေ ချက်ခြင်းချ၊ လူထုအတွင်း ရှင်းလင်းမှုတွေ ချက်ခြင်းလုပ်။
အဓိကရုဏ်း မဖြစ်အောင် တားဆီးနိုင်ရမှာပေါ့။ သည်လို ဘာကြောင့် မလုပ်ခဲ့သလဲ။ သမိုင်းအတွေ့အကြုံတွေအရ စဖြစ်ကထဲက ကျမတို့ မှာ သံသယရှိခဲ့တာ။ အခုနိုင်ငံတကာလူ့ အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းကြီးဖြစ်တဲ့Human Rights Watch ရော အခြားလူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့ အစည်းတွေ အတော်များများကပါ က ဦးသိန်းစိန် အစိုးရရဲ့ ပါဝင်ပတ်သက်မှုကို အတိအကျစွပ်စွဲလာတဲ့ အခါကျ တော့မှ ကျမတို့ ပိုပြီး သေချာသွားတယ်။
တကယ်တော့ သံလျှက်တော်ယူတဲ့ သူခိုးက ဆိုတဲ့ ဇာတ်ထဲကလို ဘုရင်ကိုယ်တိုင်က သူခိုးဖြစ် နေတာဘဲ မဟုတ်လား။ ဦးသိန်းစိန် ဦးဆောင်တဲ့ စစ်အာဏာရှင်လက်သစ်တွေက တရားခံဖြစ်နေတာ မဟုတ်ဘူးလား။ အားနည်းသူ ရိုဟင်ဂျာတွေကို ဖိနှိပ်ရက်စက်၊ ရခိုင်အမျိုးသားတွေကို ကာကွယ်သယောင်ပြပြီး စစ်တပ်ကို လူစွမ်းကောင်းနေရာ မှာရောက်အောင်တွန်းတင်တဲ့ အကြံနဲ့ စစ်အာဏာရှင်တွေနဲ့ ပူးပေါင်းကြံစည်တဲ့အထဲမှာ ကိုကိုကြီးက ဘာကြောင့်ပါခြင်ရတာလဲ။ ရိုဟင်ဂျာတွေ ၀င်လာတာဟာ အမျိုးသားရေးကို ထိပါးတယ်၊ အမျိုးသား လုံခြုံရေးပြသနာဖြစ်တယ် ဆိုရင် တရုတ်တွေကိုတော့ ဘာကြောင့်အရေးမယူသလဲ။ မန္တေလေး တမြို့လုံးလောက်နီးနီး တရုပ်တွေ သိမ်းထားသလို ဖြစ်တာဘယ်လို ရှင်းမလဲ။ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကို အကြီးအကျယ်လာဘ်ထိုးပြီး နိုင်ငံသားလက်မှတ် အမျိုးမျိုး ကိုင်နေကြတာတွေကိုဘယ်လို ရှင်းမလဲရှင့်။
နိုင်ငံခြားသားတွေ ဆယ်စုနှစ်တချို့အတွင်း သန်းတချို့ချီပြီး ၀င်လာတဲ့ ကိစ္စမှာ အဓိက တာဝန်ရှိသူတွေဟာ ၁၉၆၂ ခုနှစ်ကစပြီး တိုင်းပြည်ကို အာဏာသိမ်းအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ စစ်ခေါင်းဆောင်တွေ မဟုတ်ဘူးလား။ တရုတ်ပြည်ကအခုအချိန်မှာ အင်အားတောင့်တင်းနေတော့ စစ်အာဏာရှင်တွေက ကြောက်တာကြောင့် တရုတ်ကိုတော့ ဘာမှ သွားပြီး ပြသနာ မရှာရဲ၊ အားနည်းတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေကို ဖိထောင်းပြတာမျိုးဟာ တရားရဲ့လား။ သည်လိုတရားမဲ့ လုပ်တဲ့အတွက် မကောင်းတဲ့ အကျိုးဆက်အနေနဲ့ ရခိုင်အမျိုးသားလူထုတွေ အတွင်းမှာ မတည် မငြိမ် တောက်လျှောက် ဖြစ်၊ ကိုယ့်လုံခြုံရေးတောင် ကိုယ်စိတ်မချရဘူး ဆိုရင် စီးပွားရေးလဲ စိတ်အေးလက်အေးလုပ်ခွင့်မရ၊ ဒီ လိုအခြေအနေဟာ ရခိုင်လူထုအတွက် အမျိုးသား အကျိုးစီးပွားလို့ ပြောနိုင်ပါ့မလားရှင့်။
ကျမတို့ မိသားစုအနေနဲ့ကတော့ ရိုဟင်ဂျာလူထုအပေါ်ဖြစ်ဖြစ်၊ရခိုင်လူထုအပေါ်ဖြစ်ဖြစ်လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်တာ၊ Genocide လို့ ခေါ်တဲ့ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု ကျူးလွန်မှာ မျိုးကိုတော့ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ဘယ်အကြောင်းပြချက်နဲ့မှ လက်မခံနိုင်ဘူး ဆိုတဲ့အကြောင်း ကိုကိုကြီးကို အသိပေးလိုက်ပါရဲ့ ရှင်။
စစ်အာဏာရှင်စနစ်တိုက်ဖျက်ရေး စိတ်ဓါတ်ကို ကျမတို့ မိသားစုဟာ အသက်နဲ့ရင်း ဘ၀နဲ့ရင်းပြီးထူထောင် ခဲ့ရတာပါ။ တချိန်ကျရင် စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြုတ်ပြုတ်ပြုန်းသွားလိမ့်မယ် လို့လုံးဝယုံ ကြည်တယ်။တော်လှန်ရေးဟာ မပြီးသေးဘူးလို့ ကျမတို့ ခံယူတယ်။ စစ်အာဏာရှင်စနစ် ဆန့်ကျင်ရေး တိုက်ပွဲဟာ နည်းလမ်းပေါင်းစုံနဲ့အရှိန်အဟုန်ပြင်းပြင်းလာဦးမယ်လို့ ကျမတို့ တွက်တယ်။ အရေးကြီးတာက စိတ်ဓါတ်ဘဲ။ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဆလိုင်း ကိုတင်မောင်ဦးဟာ သူ့ အသက်ကို ပေးပြီး စစ်အာဏာရှင် စနစ် ဆန့်ကျင်ရေးစိတ်ဓါတ်ကို အမြင့်ဆုံးတင်သွားခဲ့တယ်။ ကိုကိုကြီး ပြောလိုက်တဲ့ စကား တလုံး၊ နောင်သည်လိုမျိုး ဆက်ပြောနိုင်တဲ့ စကားလုံးတွေ ကြောင့် ကျောင်းသားတွေ၊ လူထုတွေ စိတ်ဓါတ် ဦးကျိုးသွားမှာကို စိုးရိမ်တယ်။
စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို အသက်သွင်းတဲ့ စစ်ခေါင်းဆောင်အဆက်ဆက်အောက်မှာ ကိုကိုကြီးပြောတဲ့ တပ်မတော်ဆို တာဟာ လူထုကို ကာကွယ်တဲ့ အနှစ်သာရပျက်ယွင်းနေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာ ကြာနေပြီ။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း စတင်တည် ထောင်ခါစက လူထုချစ်တဲ့တပ်မတော် ဆိုတာ သမိုင်းထဲမှာဘဲ ကျန်သွားပြီ။ တိုင်းရင်းသား ပေါင်းစုံ လူထုတွေ ကိုသာမက သံဃာတော်တွေ ကိုပါ ပစ်သတ်တဲ့ "သတ်မတော်" ဖြစ်သွားပြီ။ စစ်အာဏာရှင်စနစ် အောက်မှာ စစ်ခေါင်း ဆောင်အဆက်ဆက် ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်မှု ရက်စက်မှုတွေ ကြောင့် အမျိုးသား စည်းလုံးညီညွတ် ရေးပြိုကွဲခဲ့တာဘဲရှင့်။ အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး ဆိုတာကို စစ်အာဏာရှင် စနစ်ရှိနေသမျှ ကိုကိုကြီး စိတ်ကူး မယဉ် စေခြင်ဘူး။
ရဲရင့်တဲ့ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် တဦး အနေနဲ့ ခင်ဗျားတို့ စစ်ခေါင်းဆောင်တွေ စစ်အာဏာ ရှင်စနစ်ကို အရင်ဖြုတ်ပါလို့ ဘာကြောင့် မပြောသလဲ ရှင့်။ ရိုဟင်ဂျာကို လက်ညှိုးထိုးပြီး အဲဒီ စစ်တပ်ကို သူရဲကောင်းလို လူထုတွေက ထင်ယောင်ထင်မှား ဖြစ်လာစေမယ့်
စကားမျိုးတွေကို ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တဦးနေရာကနေ မသုံးဘို့မေတ္တာရပ်ခံပါရစေရှင်။
မတရားမှုကို ဆန့်ကျင်၊ တရားမျှတမှုအတွက် တိုက်ပွဲဝင်တဲ့ ကျောင်းသားတို့ ရဲ့ခွပ်ဒေါင်း စိတ်ဓါတ်ကို ပြန်လည် တည်ဆောက်ရင်း စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ပြတ်ပြတ်သားသား ဆန့် ကျင့်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ့် ကျောင်းသားခေါင်း ဆောင် တဦးအဖြစ် ကိုကိုကြီး ကို မြင်တွေ့ လိုပါကြောင်း ပြောရင်း သည်စာကို နိဂုံးချုပ်လိုက်ပါတယ်။
Posted: 02 Aug 2012 03:07 AM PDT
Buaya merupakan haiwan yang sangat digeruni kerana kemampuannya untuk membunuh manusia dan haiwan.
Kemampuannya bergerak dalam diam sebelum melibas dan membaham mangsanya sering menjadi igauan ngeri sesiapa saja terutama yang mendiami kawasan pinggiran sungai.
Di sini disertakan sebuah klip video mengenai bagaimana usaha orang ramai mengeluarkan mayat dari perut seekor buaya yang berjaya dibunuh.
Video yang tidak diketahui lokasi dan tarikh ini secara tidak langsung membuatkan kita teringat pepatah Melayu lama…air yang tenang jangan disangka tiada buaya! – mynewshub
Posted: 02 Aug 2012 12:13 AM PDT
Even dogs needapark
WHEEL POWERBy ANTHONY THANASAYAN
THERE are wonderful people out there who simply refuse to
see handicaps in front of them. They would rather focus on the
abilities of each individual they meet, and offer the best support
possible for people with disabilities.
Last week brought many lessons for me as I got down to tackle one of
Posted: 02 Aug 2012 01:04 AM PDT
Kuala Lumpur - "Tolong jaga anak saya baik-baik," itulah pesanan terakhir Allahyarham Siti Noor Edayu Roslan, 26, kepada penjaga anaknya sebelum dia bersama suaminya, Mohd Hafeeze Mohd Hanafi, 30, maut dalam kemalangan di Jalan 15/56 AU3, Keramat, di sini, pagi semalam.
Gambar: Di sebelah adalah gambar kanak-kanak yang kehilangan ibu bapanya dalam kemalangan di Jalan 15/56 AU 3, Keramat semalam. Kanak-kanak kecil ini bernama Mohd Hanif Hafezee dan baru berumur2tahun.
"Kali terakhir kami sekeluarga berbuka puasa bersama pada Isnin lalu, Allahyarham ada memberi sejumlah wang untuk diadakan majlis kenduri pada hari raya Aidilfitri," katanya.
Dalam kejadian pada jam7pagi itu, Hafeeze bersama Edayu Roslan (gambar) yang hamil tujuh bulan, baru menghantar anak sulungnya di rumah pengasuh.
"Kejadian itu dipercayai berlaku ekoran kegagalan pemandu bas mengawal kenderaannya ketika menuruni bukit lalu melanggar mangsa yang sedang berhenti di belakang sebuah bas sekolah yang lain di persimpangan itu," katanya.
"Kita masih menyiasat kejadian tersebut. Ia berkemungkinan berpunca daripada kegagalan sistem brek bas terbabit," katanya.
"Sebelum melanggar motosikal itu, saya nampak bas tersebut cuba mengelak kereta jenis Mercedes, lalu merempuh motosikal yang dinaiki mangsa di hadapannya, menyebabkan mereka tersepit di antara dua bas," katanya.